Etu esi atụ ROI nke Mgbasa Ozi Vidio Gị | Martech Zone
Mmepụta vidio bụ otu n'ime usoro azụmaahịa ndị a na-esighi ike dee ma a bịa na ROI. Vidio na-adọrọ adọrọ nwere ike inye ikike na ezi obi nke na-eme ka ụdị gị dị egwu ma na-eme ka atụmanya gị nwee mkpebi ịzụta. Lee ụfọdụ ọnụ ọgụgụ dị ịtụnanya metụtara vidiyo:
Vidio agbakwunyere na weebụsaịtị gị nwere ike ime ka 80% mụbaa na ọnụego ntụgharị
Ozi ịntanetị nwere vidiyo nwere ọnụọgụ pịa 96% dị elu ma e jiri ya tụnyere email na-abụghị vidiyo
Ndị na-ere ahịa vidiyo na-enweta 66% ndị ọzọ tozuru etozu kwa afọ
Ndị na-ere vidio na-enwe ọ aụ mmụba 54% na mmata ụdị
83% nke ndị na-eji vidiyo kwenyere na ha nwere ezigbo ROI site na ya na 82% kwenyere na ọ bụ atụmatụ dị oke egwu
Businesseszụ ahịa ndị pere mpe na ndị obere na-ebido na 55% na-emepụta vidiyo na ọnwa 12 gara aga
Otu Mmepụta mepụtara nkọwa nkọwa a zuru ezu, Mmetụta ROI na Mgbasa Ozi Mgbasa Ozi vidiyo. Ọ na - akọwa metrics ị kwesịrị ị na - enyocha iji meziwanye ahịa vidiyo gị ROI, gụnyere na-elele, njikọ aka, ntụgharị ntụgharị, mmekọrịta mmadụ na ibe ya, nzaghachi, na ngụkọta ọnụ.
Ihe omuma ihe ndia na ekwu okwu banyere nkesa nke vidiyo gi ka odi ka mmetụta ya. Enwere m mmasị na ha na-ekekọrịta email na ntinye aka email dị ka nnukwu ebe iji kwalite vidiyo gị. Isi ihe nkesa ozo nke metụrụ aka bụ Youtube na njikarịcha njin ọchụchọ. Echefula na e nwere usoro abụọ nwere ike ịmetụta ọchụchọ mgbe ị na-ere ahịa site na vidiyo:
Nchọgharị vidiyo - Youtube bu ihe nyocha nke abuo nke kachasi na inwere ike iduzi otutu uzo ozo gaa na akara ika gi ma obu ibata akwukwo maka ntughari. Ọ chọrọ ụfọdụ njikarịcha nke vidiyo vidiyo Youtube gị, ọ bụ ezie. Ọtụtụ ụlọ ọrụ na-atụfu ihe a!
Ọkwa ọdịnaya - Na gị onwe gị na saịtị, na-agbakwunye a video ka a na-kachasị, zuru ezu isiokwu nwere ike budata mma gị Ohere nke na-họọrọ, òkè, na zoro aka.
Nke a bụ ozi infographic zuru oke yana ụfọdụ nnukwu ozi!
Tags: ntụgharị ntụgharịvidiyo vidiyonjikọ akametrik vidiyo dị mkpaotúatụ roiROIvideo efunkesa vidiyoemail vidiyonzaghachi vidiyoahịa vidiyovideo ahịa mkpọsavidiyo vidiyovideo atụmatụvidiyo roivideo nkekọrịtambinye aka vidiyoọnụ ọgụgụ vidiyona-eleleyoutube